#Kismaayo: ololaha doorashada guddoonka iyo labadiisa ku xigeen oo billaabatay - Get Latest News From Horn of Africa
#Kismaayo: ololaha doorashada guddoonka iyo labadiisa ku xigeen oo billaabatay
Sheekh Cabdi Yuusuf Cali; ayaa loo doortay in uu noqday Guddoomiyaha KMG ee Baarlamaanka Jubbaland, inta laga soo dooranayo Guddoon cusub.
Guddoomiyaha KMG ah ee Baarlamaanka Jubaland si rasmi ah uguma dhawaaqin waqtiga ay qabsoomeyso doorashada Guddoonka iyo ku xigeennadiisa.
Doorashadaasi ayaa waxaa xigi doonta tan madaxweynaha oo la rajeynayo in ay qabsoonto 24ka bishaan August ee sanadkan 2019, iyadda oo aad isha loogu hayo natiijadda kasoo bixi doonta.
Magaalada Kismaayo ee Caasimada Ku meel gaarka ah ee Jubaland oo waayadii u dambeeyey la hayd Siyaasad labo waji ah ayaa waxaa geesta kale Xubnaha isbadal doonka ay wadaan Kulamo gaar ah oo magaalada ka dhacaya.
Magaalada kismaayo ayaa shalay waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen musharaxiinta la magac baxay isbadal doonkaa oo ay hogaaminayaan Seerar,Xiddig iyo kuwa kale kuwaas oo sheegay in ay arinsadeen dhaarinta xildhibaanada Guddigooda doorashada shalay ay shaaciyeen.
Xubnahan oo qaarkood aynu la hadalnay ayaa inoo sheegay in magaalada ay kawadaan diyaar garowgii ugu dambeeysay ee ku aaddan dhaarinta xubnaha xildhibaanada ay magacoowdeen.
Siyaasadaha is diidan ee kismaayo kasoo cusboonaanaya ,waxaana wali ka hadlin Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waloow kol hore waraaq kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya lagu sheetgay in aan marnaba dowlada aysna aqoonsaneyn natiijo walba oo doorashada jubaland kasoo baxda.
Beesha caalamka ayaa iyana waraaq ay dhawaan u direen guddiga doorashada iyo xuduudaha jubaland kaga dalbadeen in ay soo cadeeyaan sida musharxiinta kale ee guddiga ugu kalsoonaan karaan waloow todobaadkii hore ay ka jawaabeen guddiga.